Yeka iphupho ngezingane ezibikezelayo: zijabule, zingenangqondo noma ziyadabukisa. Yini ongayilindela ephusheni elinjalo kumbhangqwana osemusha.
Izingane ziphupha ngalokho okushiwo leli phupho.
Izingane zilokhu ziletha injabulo ekuphileni, zivuselele ithemba futhi zinike amandla angalindelekile. Ngakho-ke, amaphupho lapho izingane zikhona zigcwele ukuhleka nokuhle. Kodwa namanje, kungakhathaliseki ukuthi leli phupho lilijabulisa kangakanani, kudingeka uhlaziye izenzakalo kulo ukuze unqume ukuthi yini ongayilindela esikhathini esizayo.
Bantani izingane ephusheni
Okuningi kuxhomeke kulokhu. Ngosizo lwezenzo ephusheni kunokwenzeka ukunquma ukuthi izenzakalo ezijabulisayo noma ezibuhlungu zilindele esikhathini esizayo.
izingane ziletha izimbali, amaswidi noma ezinye izipho. Ekuphileni kwangempela, uzothola impumelelo ebhizinisini nasenjabulweni emkhayeni womndeni.
izingane zixabana - kusho ukuthi kufanele uxazulule izinkinga zomndeni, futhi ngeke zihlotshaniswe nenzalo.
ephusheni elinjalo kungenzeka ukuthi ubone ukuthi yikuphi okuhlangenwe nakho okuhlangenwe nakho ekuphileni kwakho. Kungenzeka ukuthi iphupho elinjalo libonisa ukuthi uzizwa usengozini futhi uncike kwabanye. Ukuze uqonde ngokucophelela okuhlangenwe nakho kwakho okufihliwe, udinga ukukhumbula ukuthi yikuphi izingane okwakwenzeke kulophupho, ukuthi yibulili bobubili. Ngokusekelwe kulokhu ungathola ukuhumusha okudingekayo.
uma uphupha abafana abathulile - uzozizwa unamandla amakhulu, ibhizinisi lakho lizoqala ukuthuthukisa futhi uzoqala kancane ukufezekisa impumelelo entsha.
abafana badlala umdlalo osebenzayo futhi baxoxe - khona-ke maduzane uzozwa izinkinga emndenini nangemali.
uma abafana bexabana ngento ethile, akufanele uthembele kuphela emibonweni yakho. Cela iseluleko somuntu omdala, futhi uma usuvele usuhlinzekelwe usizo oluvela kubantu abanolwazi oluningi, ungayeki kulo. Ngakho ungakwazi ngokushesha ukuthuthukisa ibhizinisi labo. Mhlawumbe, unesihloko esincane kakhulu mayelana nokuphila kwakho nomsebenzi wakho.
kubi uma omunye wabafana elimala ngesikhathi semidlalo. Uma kunjalo, udinga ukugxila ezintweni kuphela, ngoba isimo sengqondo sakho esingenabalulekile singakuholela ekuweni.
amantombazane owazi kahle futhi anobungane nawe abikezela ukuthi uphathwa kahle ngabanye futhi usebenzisa ukuzethemba nokugunyazwa kwabo. Uma amantombazane engakajwayele, kepha ejabule futhi enenhlalo, khona-ke leli phupho lifanekisela abajwayele ukuxhumana nabangane.
izingane ezingenangqondo futhi ezingamlaleli, zifakazela ubuhlobo bakho obuyinkimbinkimbi nabanye. Futhi uma abantwana bekhala futhi kuwe, kusho ukuthi ubuhlobo nomlingani buphele ngokuphelele futhi uma ungenqobe impikiswano, mhlawumbe ngisho nekhefu.
Okunye ukuhumusha amaphupho mayelana nezingane
Kwenzeka ukuthi uphupha ukuthi ulondoloza ingane ekufeni (isibonelo, khipha ingane emanzini). Lokhu kusho ukuthi empeleni uzothola udumo, udumo nenhlonipho. Ngaphezu kwalokho, uzimisele ukunikeza abanye ukuthi bahlale bekulungele ukusiza.
Nokho, kukhona omunye umbono. Ukulondoloza ingane ephusheni kufakazela ukuthi uzizwa ungagcini, futhi kubonakala sengathi abanye abawubongi imizamo yakho.
Ukubona ingane esihlalweni sabakhubazekile kunezincazelo eziningi, kuye ngokuthi ingane ibheke kanjani nokuthi umgibeli uqobo.
Uma ubuthongo buhle, ingane ilele futhi imomotheka, futhi isitulo sabakhubazekile ngokwalo sinamuhla futhi sinethezekile, khona-ke maduzane uzothola injabulo engalindelekile.
Umgibeli ongcolile ngaphandle kwengane kusho ukuthi ungabaza ukuthi umuntu ovela endaweni yakho uyathembeka. Kodwa empeleni, kuvela ukuthi izinsolo zakho zazingenasisekelo.
Imibhangqwana esanda kushada, iphoyisa elinjalo liphilisa ukugcwaliswa okusheshayo. Kodwa uma uphupha ukuthi uyagubha ingane futhi uyomhubela i-lullaby - zilungele ukuthi uzoba nesikhathi sokucindezeleka nosizi. Mhlawumbe uzohlukanisa nomthandi wakho futhi uzomkhumbula kakhulu. Noma nje uzizwe ukubola.
Amaphupho ngabesifazane abakhulelwe: sichaza amaphupho ngendlela efanele
Yini indoda engaphambili ephupha ngayo?
Kungani umbikezeli wenhlanhla enekhadi
Kungani amaxoxo ephupha. Ukuhunyushwa kwezincwadi zamaphupho adumile
Iyini iphupho elibheke ngayo?
Kungani ngidinga ibhulogi?
Uma ingane ibetha unina
UJoseph Kobzon wakhuluma ngesizathu sokuhlukanisa noLyudmila Gurchenko
Izakhiwo zokwelapha nezomlingo we-malachite
Izindlela eziyisisekelo zokunakekela ubuso
I-pike perch ekhilimu omuncu
Phuma ekuphumeni kwezingane
Umphayi wase-German apula
Indlela yokupheka inyama ephepheni
"Rotaru - ukwethuka, i-Allegrova - inhlamba," - ukuqhutshwa kocansi ngePugacheva
Yini eyingozi eziphuzweni zika-carbonated?
Ingulube nelayisi ku-multivark
Biography of Mikhail Afanasyevich Bulgakov